ဖခင်နှင့် မိထွေး ပေါင်းပြီး လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် ခံခဲ့ရတဲ့ ၁၃ နှစ်သမီးလေးရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုး...
ဖခင်နှင့် မိထွေး ပေါင်းပြီး ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီး သေဆုံးသွားရတဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး ရဲ့ ကြေကွဲစရာ ဘဝ
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၁၆ ရက်နေ့ တောင်ကိုရီးယား- ဘူချွန်းမြို့ ( Bucheon, Gyeonggi-do,South Korea )
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ တံခါးပိတ်ထားတဲ့ အိမ်အရှေ့မှာကြောက်လန့် အားငယ်စွာ ရပ်နေပါတယ်။
သူမဟာ ကြောက်လွန်းလို့ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ရင်နေတယ်…။ အိမ်ထဲကို မဝင်ရဲလို့ပါ..။ အကြိမ်ကြိမ်အားမွေးပေမယ့်လည်း သူမ အိမ်ထဲဝင်ဖို့ သတ္တိရှိမလာ…။
အချိန်တွေကြာလာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူမ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…။
‘ငါ့ ဘဝမှာ ဒီအိမ်ထဲဝင်ဖို့ကလွဲပြီး ရွေးစရာလမ်းမရှိတော့တာပဲ… ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်…’ သူမလေးလံစွာတွေးလိုက်တယ်။
လူတွေဟာ သူမကို အိမ်ပြေးဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုးတတ်လိုက်ကြပြီး မကူညီတော့ဘူးလေ….။
သူမကြားရတဲ့စကားလုံးတွေကတော့… “မိဘတွေ စိတ်ပူနေမယ်… အိမ်ပြန်…”
သူမဟာ လေးလံတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ သူမအိမ်ဖက်ကို လျှောက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့လည်း အိမ်ထဲမဝင်ရဲတဲ့ဘဝ…။ နောက်ဆုံး …သူမ အရဲစွန့်ပြီး အိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်..။
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ သူမရဲ့မိခင်ဟာ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ အမေရှိစဉ်ကတည်းက ဒေါသတကြီး ရိုက်နှက်ဆုံးမလေ့ရှိတဲ့ အဖေ… အခုအမေမရှိတော့ပိုဆိုးလာတယ်..။
အမေမဲ့ကလေး ၃ ယောက်ဟာ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ လောကအလယ်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ သူမက အငယ်ဆုံးပေါ့ … သူမမှာ အစ်မတစ်ယောက် အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဖခင် ‘ရီ’ဟာ ‘ဘက်ခ်’ ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့တယ်။ ကလေး ၃ ယောက်အဖေကို ယူလိုက်တဲ့ မိထွေး ဘက်ခ်ဟာ အဖေကိုပဲလက်ထပ်ချင်တာ… ကလေးတွေကို သိပ်ပြီး မုန်းတယ်။
ကလေး ၃ ယောက်နဲ့မိထွေးကြား ပြဿနာကကြီးမားလာတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ရောက်တော့ အသက် ၂၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အစ်ကိုအကြီးဆုံးဟာ အိမ်ကထွက်ပြီး အဆောင်မှာနေလိုက်တော့တယ်။
အသက် ၁၈ အရွယ်ရှိတဲ့ အစ်မလတ်ကတော့ ဂျာမနီကို ပညာသင်ဖို့ ဖခင်ကလွှတ်ခဲ့တယ်။ သူမဖခင်နဲ့မိထွေးဟာ နှစ်ယောက်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်လို့ သူမကို မိထွေးရဲ့ ညီမအရင်းအိမ်ပို့လိုက်ကြတယ်။
မိထွေးညီမမှာ သားသမီးတွေနဲ့… သူတို့အားလုံးပေါင်းပြီး ကလေးမလေးကို နှိပ်စက်ကြတယ်။ သူမ အမြဲအရိုက်ခံရတယ်…။ သူများအိမ်မှာ သူများမျက်နှာကြည့်ပြီး ကြောက်လန့်စွာနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သူမ အဖေနဲ့ မိထွေးဟာ နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ပြီး အပျော်ဆုံးပျားရည်ဆမ်းတဲ့နေ့တွေကို ပိုင်ဆိုင်နေခဲ့တာပေါ့…။၂၀၁၅…မှာ သူမဟာ အခု အသက် ၁၃ နှစ် … မူလတန်းကျောင်းပြီးလို့ အလယ်တန်းတက်ဖို့ တစ်ပတ်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်…။
သူမဘဝရဲ့ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲချိန်… သူမ အလယ်တန်းကျောင်းသူကြီးဖြစ်တော့မယ်..။ ဒါပေမဲ့ သူမမှာ ဘာတစ်ခုမှ ပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့။သူမအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အလယ်တန်းကျောင်းကြီးကို တက်ရမယ့်အချိန် သူမရဲ့နံဘေးမှာ အားပေးကူညီမယ့်သူ တစ်ယောက်မှမရှိခဲ့…။
“အန်တီ .. ကျွန်မ ကျောပိုးအိတ် အသစ်လေး လိုချင်လို့…” မိထွေးရဲ့ညီမက သူမကို နှိပ်စက်တယ်…။ ဒီတစ်ခါတော့ သူမ တော်တော် ဒါဏ်ရာရသွားတယ်။နောက်ဆုံး ဒီလိုနှိပ်စက်တာ မခံနိုင်လွန်းလို့ သူမဟာ မိထွေးရဲ့ညီမအိမ်ကထွက်ပြေးခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။သူမ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆီသွားပြီး တစ်ညလောက်အိပ်ခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ သူမတကိုယ်လုံးရနေတဲ့ဒါဏ်ရာတွေ ၊ အညိုအမည်းစွဲနေတာတွေသူငယ်ချင်းကို ပြ…သူမငိုတယ်..။
“ငါဘာဆက်လုပ်ရင် ကောင်းမလဲသူငယ်ချင်း..?” သူငယ်ချင်းမလေးက“ငါ အကြံရပြီ… ငါတို့တတွေ မူလတန်းတုန်းက အတန်းပိုင် ဆရာမကိုသွားပြောရင်ကောင်းမလား..” ရဲစခန်းတိုင်ရမှာကိုတောင် မတွေးတတ်ကြသေးတဲ့ အရွယ်တွေမို့ အားကိုးစရာဆိုတာ ဆရာမပဲလေ..။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၁၆ ရက်နေ့ ကလေးမနှစ်ယောက်ဟာ အတန်းပိုင်ဆရာမဆီ အားကိုးတကြီးသွားပြီး ဖြစ်သမျှ အကြောင်းစုံကို တိုင်ကြားလိုက်တယ်။ ဆရာမဟာ သူမ ရောက်နေတဲ့အကြောင်းကို သူမ အဖေကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်တော့တာပါပဲ…။
” မင်းအဖေကို ဖုန်းဆက်ပြီးပြီ.. မင်းအဖေ စိတ်ဆိုးနေတယ်… အိမ်ပြန်ပါ…မင်းအဖေက မရိုက်တော့ပါဘူး .. ဆရာမ စကားကိုနားထောင်နော်..အဖေထပ်ရိုက်ရင် ဆရာမကိုပြောပြ…
”ရက်စက်လိုက်တာ… လို့တွေးရုံမှတပါး သူမ ဘာမှ ဆက်မပြောနိုင်ရှာ…။ ဖခင်က သူမကိုလာခေါ်သွားတယ်။ ဖခင်ဟာ သူမကို ဒေါသတကြီးရိုက်နှက်တယ်။
ကြောက်လွန်းလို့ သူမဟာ ဖခင်လစ်တာနဲ့ အိမ်အပြင်ကို ပြေးထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ သူမဟာ ဆရာမအိမ်ကို အားကိုးတကြီးပြေးလာခဲ့ပြန်တယ်။ ဆရာမက အိမ်မှာမရှိ…။
သူမ တစ်ယောက်တည်း တံခါးအပြင်ဖက်မှာ ထိုင်ငိုနေတုန်း အဆောက်အဦ အစောင့်ကြီးက ရောက်လာတယ်…။
” အဘရယ်.. သမီးကို ကယ်ပါ.. သမီး အိမ်ကပြေးလာခဲ့တာပါ.. အိမ်ပြန်ရင် သမီးကိုအဖေက သတ်လိမ့်မယ်… သမီးကို တစ်ညလောက် အဘတို့အိမ်မှာ အိပ်ခွင့်ပေးပါ..”
အစောင့်အဘိုးကြီးက သူမကို မယုံသင်္ကာနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ သူမ ဘယ်မှာနေလဲ ချော့မေးပြီး မိထွေးရဲ့ညီမအိမ်အထိလိုက်ပို့လိုက်ပြန်တယ်..။အစောင့်အဘိုးကြီးဟာ သူမ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားကိုးတကြီး အကူအညီတောင်းခဲ့သူဖြစ်တယ်။
အစောင့်အဘိုးကြီးသာ သူမကို အိမ်ပြန်မပို့ပဲ ရဲစခန်းပို့ခဲ့ရင်….သူမ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးခဲ့မလားပဲ…။မိထွေးရဲ့ညီမဟာ သူမကို ညတွင်းချင်း သူမရဲ့ ဖခင် အိမ်နားမှာချထားခဲ့ပြန်တယ်။
” နင် အိမ်ထဲဝင်ချင်ဝင် .. မဝင်ချင် ကြိုက်တဲ့နေရာသွား..ငါ့တာဝန်ပြီးပြီ..”
မိုးလင်းခါနီးပြီ…အိမ်နီးနားချင်းတွေတွေ့ရင် အဖေပိုဒေါသထွက်တော့မယ်…လို့တွေးပြီးနောက်ဆုံးတော့ သူမ အိမ်ထဲဝင်သွားလိုက်တယ်။သူမ ထမင်းမစားရတာလဲ မနေ့က နေ့လယ်ကတည်းက…။
သူမ ဖခင်နဲ့မိထွေးဟာ သူမကို ဒေါသတကြီးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။ပြီးတော့ ဖခင်နဲ့မိထွေးဟာ သူမ တကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဝိုင်းချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။
“ကဲ… ဒီလောက်ထွက်ပြေးချင်ရင် ကိုယ်လုံးတီးထွက်ပြေးလေ..!!”…တဲ့သူမ တစ်နေ့လုံးလုံး (၁၅ နာရီ ခန့် )ဖခင်အရင်းနဲ့မိထွေးတို့ရဲ့ ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်…။
စိတ်ပညာအရ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် အရိုက်ခံရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုကို ဆက်တိုက်ခံစားရတယ်တဲ့…။ သူမ သွေးပျက်မတတ် သိပ်ကြောက်နေခဲ့တယ်။
အဝတ်အစားမရှိတဲ့သူမဟာ အိမ်အပြင်ကို မထွက်ဝံ့တော့ပဲ နာကျင်တဲ့ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ပေါ့….။ ညဖက်ရောက်တော့ အိပ်ယာထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီး သူမဟာ အိမ်အပြင်ပြန်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး..။
အိပ်ယာထဲဝင်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ သူမဟာ အရိုက်ခံရတဲ့ဒါဏ်ရာတွေကြောင့် အသက်ရူလို့မရတော့ပဲ လောကကြီးကို နာကျည်းစွာနဲ့… နာကျင်စွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်…။
မနက် ၇ နာရီမှာ ဒေါသမပြေသေးတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်က ဆက်ပြီး အပြစ်ပေးဖို့ သူမရဲ့အိပ်ခန်းတံခါးကို ဒေါသတကြီးဆွဲဖွင့်လိုက်ကြတယ်။
လူယုတ်မာ လင်မယားနှစ်ယောက် သူမကို ထပ်ပြီးရိုက်ခွင့်မရှိတော့ပြီ… ကိုယ်လုံးတီးနဲ့သူမဟာ အသက်ကင်းမဲ့နေပါပြီ…။အဲဒီ လူယုတ်မာ ဖခင်နဲ့မိထွေးဟာ သူမ အလောင်းကို စောင်နဲ့ပတ်ပြီး အနံမထွက်အောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆေးစီရင်ခဲ့ကြတယ်…။
စောင်ထဲက ကလေးမလေးဟာ သူမကို ကယ်ဖို့ “ကျွန်မ ဒီမှာရှိပါတယ်..”လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အကူအညီမတောင်းနိုင်တော့ပြီ..။၁၁ လကြာသွားတယ်။နောက်ဆုံး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အကူအညီနဲ့ သူမရဲ့အလောင်းဟာ အိမ်အပြင်ကိုထွက်နိုင်ခဲ့တယ်…။
အိမ်ဆိုတာ သူမအတွက်ငရဲပြည်…။ငရဲပြည်ထဲကို သူမကိုယ်တိုင် ခြေလှမ်းပြီး ဝင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်..။သူမဟာ အိမ်ထဲဝင် ဝင်ပြီးချင်း နောက်တနေ့မှာ အသက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။၁၁ လ လုံးလုံး သူမရဲ့ အလောင်းဟာ သူမ မနေချင်တဲ့ အဲဒီအိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တယ်…။
ပိုပြီး အံ့သြရတာက သူမကို သတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့အဖေအရင်းဟာ ဘူချွန်းရဲ့ ( Holiness Church ) ခရစ်ယာန် ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ လူတကာကြည်ညိုခြင်းခံရတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…။
သူမရဲ့ ဖခင်ဟာ ဆိုလ်းမြို့ရဲ့ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (Seoul Technology University )မှာ လူတကာလေးစားရတဲ့ ပါမောက္ခ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။
ကလေးမလေး အလောင်းကို ရဲတွေ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တာကတော့ အလယ်တန်းဆရာမနဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းမကြောင့်ပါ။သူမကို ကျောင်းလာမအပ်တာကြောင့် အလယ်တန်း ကျောင်းဆရာမဟာ သူမရဲ့အဖေကို ဖုန်းခေါ်လာတယ်..။
” ကလေးမလေးကို ဘာလို့ ကျောင်းမပို့တာလဲရှင့်..?”
“ဒါဆို ဘာလို့ ရဲစခန်းမှာ လူပျောက်မှု အမှုမဖွင့်တာလဲရှင့်.. ကျွန်မ အမှုဖွင့်ရမလား…?”ကလေးမအဖေ ရီ ဟာ မတတ်သာလို့ နောက်ဆုံး လူပျောက်မှုဖွင့်လိုက်ရတယ်…။ ရဲစခန်းမှာ သူမအဖေဟာ ဒီလိုရေးတယ်။
ကလေးမလေးပျောက်သွားနေ့- ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၃ လပိုင်း ၁၇ ရက်နေ့ ကလေးမလေး လောကကြီးကိုထွက်ခွာသွားတဲ့နေ့…။
” အာ..,သမီးက ငွေတွေ အများကြီးယူပြီး အိမ်ကထွက်ပြေးသွားတာဗျ.. သိပ်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုဘူး…”
လောကကြီးထဲက ဘယ်လို မိဘမျိုးက ၁၃ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး အိမ်ကထွက်ပြေးသွားတာကို ငွေတွေပါသွားလို့ စိတ်မပူတာပါလိမ့်…။သာမာန်လူတစ်ယောက်တောင် ဒီလိုတွေးတတ်ပေမဲ့ ရဲစခန်းကတော့ အလုပ်သဘောအရပါပဲ…။ “ဪ.. ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ..”
” ဒီကောင်မလေး ခဏခဏအိမ်ကထွက်ပြေးတော့ ကျွန်တော့်အဖို့ မထူးဆန်းသလိုပါပဲဗျာ..” လောကကြီးမှာ လူတွေဟာ ဒီလို စာနာစိတ်မဲ့ကုန်ကြပြီ…။ကလေးမလေးကို လူတွေအားလုံး မေ့သွားကြပြန်ရော…။
ဒါနဲ့ပဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကိုရောက်လာပြီ..။ ကလေးမလေး ပျောက်ဆုံးသွားတာကို မမေ့ပဲ ဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ကလေးမလေးရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းမလေးပေါ့…။ သူငယ်ချင်းမလေးဟာ သူမမိခင်ကို ရဲစခန်းပို့ပေးဖို့ ပူဆာတယ်။
” ကျွန်မ သူငယ်ချင်းနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့နေ့က သူငယ်ချင်းဟာ အရိုက်ခံထားရတာ တစ်ကိုယ်လုံး အညိုအမည်းစွဲနေပါတယ်..”
သူငယ်ချင်းမလေး တိုင်ကြားချက်အရ ဒါဟာ ကလေးနှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု.. ။ရဲတွေဟာ ဝရမ်းမပါ အိမ်ထဲဝင်ရှာရလို့ရခဲ့တယ်။
အခုမှရဲတွေသတိပြုမိတာက ကလေးမရဲ့အဖေကို ချိန်းတိုင်း အိမ်မှာ အတွေ့မခံခဲ့…။ မသင်္ကာစရာ…။ ရဲတွေဟာ ရီနဲ့ ဘက်ခ် လင်မယားနေတဲ့အိမ်ထဲကို ခွင့်မတောင်းပဲ ရုတ်တရက်ဝင်လိုက်တယ်..။
အနံ့တစ်မျိုး လှိုင်တက်လာတယ်… အမွှေးနံ့လိုလို…။ အိပ်ခန်းတံခါးကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တော့ စောင်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ မမ်မီရုပ်အလောင်းတစ်ခု … ။
သူမ အလောင်းကို အနံ့မထွက်အောင် ဆေးနဲ့စိမ်.., ရေမွေး .. စပရေးအစုံအလင် အမျိုးမျိုး လုပ်ထားကြတာကို အံ့ဩတကြီးတွေ့လိုက်ရတော့တယ်..။
“သမီးလေးကို ဆုတောင်းပေးရင် အသက်ပြန်ရှင်မယ်ထင်လို့ နေ့တိုင်းဆုတောင်းပေးနေခဲ့တာပါ…” ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး အရေခြုံ ပါမောက္ခကြီး ရီ ဟာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်တယ်။
ပထမတော့ ရဲတွေက ” စိတ်များမနှံ့လို့လား..?” ဆိုပြီးတွေးကြသေးတယ်။ သမီးလေးဆုံးတဲ့နေ့ကို စစ်ဆေးလိုက်တော့ ဘဏ်ကဒ်သုံးထားတာတွေ့ရတယ်…။
သမီးလေးဆုံးတဲ့နေ့မှာ ကြက်ကြော်နဲ့ ဘီယာတွေ ဝယ်ပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် သောက်စားနေကြတာကို သိသွားကြတယ်…။ ရက်စက်လိုက်တာ…။ ဒါဟာ ဆုတောင်းပေးတာလား…။
လူသားတစ်ယောက်ကတော့ ဆာလောင် နာကျင်စွာနဲ့ မျက်ရည်စက်လက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ….။ဖခင်ဆိုပေမဲ့ တိရိစ္ဆာန်စိတ်ဝင်နေသူကြီးကတော့ ကြက်ကြော်နဲ့ ဘီယာ…။
လောကကြီးဟာ တစ်ခါတစ်လေ ဒီလို သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်…။ နောက်ဆုံး အချိန် အထိ ရီ ဟာ သူ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး ဆိုတာကို အသုံးချချင်ခဲ့သေးတယ်။
ဘာတဲ့..? ဆုတောင်းရင် အသက်ပြန်ရှင်မတဲ့လား..? ရီ နဲ့ ဘက်ခ်ကို အမှုစစ်ကြတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ သူမဟာ အစာရေစာတောင် ဝ လင်အောင်မစားခဲ့ရဘူးဆိုတာ သူငယ်ချင်းကတဆင့် ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်..။
မိထွေးက သူမ တစ်ခါမှ မနှိပ်စက်ခဲ့ပါဘူးလို့လိမ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိထွေးညီမက အပြစ်ကျမှာစိုးတော့ အစ်မ မကောင်းကြောင်းတွေ ဖော်ထုတ်တော့တယ်…။
နောက်ဆုံး မိထွေးနဲ့ ဖခင် စိတ်တူ ကိုယ်တူ စိတ်တိုင်းကျနှိပ်စက်ခဲ့တာ အကုန်ပေါ်တော့တာပါပဲ…။ဖခင်နဲ့ မိထွေးဟာ ကလေးမလေးကို ညီမအိမ်မှာထားတယ်ဆိုပေမဲ့ ညီမ စိတ်တိုင်းမကျ ပြန်တိုင်တန်းရင် သမီးလေးကို သူတို့လင်မယားအိမ်ခေါ်ပြီး နှိပ်စက်နေကျ…။
ပြဿနာက သူတို့နှစ်ယောက် ဟာသမီးလေးကို တတိတိနဲ့ သတ်ခဲ့ကြတာမှန်ပေမဲ့ လူသတ်မှုလို့ တရားစွဲရအောင် သက်သေမလုံလောက်ခဲ့..။၁၁ လကြာပြီဖြစ်တဲ့ အလောင်းမှာ သက်သေရယ်လို့ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး..။ရိုက်နှက်လို့ သေသွားတာ မှန်တယ်.. ။
ဒါပေမဲ့ ရိုက်ရင်းနဲ့ ကလေးမလေးက အသက်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ သက်သေမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ကလေးနှိပ်စက်မှုနဲ့ပဲ တရားစွဲနိုင်တော့တယ်။
ဒါကြောင့် ရဲထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ဖခင်-ရီ ကို ထောင်ဒါဏ် ၁၅ နှစ် ပေးပြီး မိထွေး-ဘက်ခ်ကို ထောင်ဒါဏ် ၁၂ နှစ်ကျခံစေဖို့ တရားသူကြီးဆီ အဆို တင်သွင်းကြတယ်။
ဒါ ရဲထောက်လှမ်းရေးဖက်ကလုပ်နိုင်တဲ့ တရား ဥပဒေဘောင်အတွင်းက အမြင့်ဆုံး အပြစ်ပေးနိုင်မှု…။
ယေဘုယျအားဖြင့် ရဲ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေဟာ သူတို့ တတ်နိုင်သလောက်အမြင့်ဆုံးစွဲချက်တင်ပြီး အမြင့်ဆုံး အပြစ်ဒါဏ်ပေးအောင် တောင်းဆိုလေ့ရှိတယ်။
တရားသူကြီးက ရဲထောက်လှမ်းရေးဖက်က အဆိုတင်သွင်းတာထက် လျှော့ပြီး အပြစ်ပေးလေ့ရှိတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ တရားသူကြီးဟာ ယုတ်မာတဲ့လင်မယားကို ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေ တင်သွင်းတဲ့ အဆိုထက် ပိုပြီး အပြစ်ပေးခဲ့တယ်။
ဖခင် ရီ ကို ထောင်ဒါဏ် ၂၀ နှစ်…. မိထွေး ဘက်ခ်ကို ထောင်ဒါဏ် ၁၅ နှစ်….။လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ဒီလိုကြီးမားတဲ့အပြစ်ဒါဏ်နဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် မတန်ပါဘူးတဲ့… အပြစ်ဒါဏ်လျှော့ပေါ့ဖို့ အယူခံဝင်ကြတယ်..။ ဖခင်ဖြစ်သူက ဒီလိုပြောပါတယ်…။
“ကျွန်တော့် သမီးဟာ အရိုက်ခံရထိုက်လို့ ရိုက်ခဲ့တာပါ… သူ့အပြစ်သူခံရတာပါ…”…တဲ့..။ ဒါ ဖခင် တဲ့လား..?
ဒီလူကို တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာ နာကျည်းရွံရှာလွန်းလို့ သေဒါဏ်တောင် ပေးစေချင်ကြတယ်…။
ကလေးမလေးရဲ့ မူလတန်းကျောင်း မှတ်တမ်းမှာ ကလေးမလေးဟာ စာကြိုးစားသူ…ရိုးသားသူ… ကြင်နာတတ်သူ… သူ့တာဝန်သူယူလိုစိတ်ကြီးမားသူ ..လို့ အတိအကျရေးထားတယ်။
သူမဟာ အရိုက်ခံထိုက်တဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သက်သေပဲလေ…။ဒါကြောင့် အဖေယုတ်ရဲ့ အယူခံကို တရားသူကြီးက ပယ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီကလေးမလေး သတင်းကိုကြားရတဲ့ တောင်ကိုရီးယားပြည်သူ ပြည်သားတွေဟာ ပူဆွေး ဝမ်းနည်းရတယ်…။ သူတို့တွေအထဲက ဝမ်းအနည်းဆုံးသူတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်…။
အစောင့်အဘိုးကြီးပါ….။ အဘိုးကြီး မျက်ရည်ကျနေခဲ့တယ်။ ဒီလောကကြီးက လူကြီးတွေဟာ ကလေးတွေ စကားပြောရင် အစ အဆုံးနားထောင်ပေးကြရင်..။
ဘဝမှာ ကိုယ့်အပူနဲ့ကိုယ် အလုပ်ရှုပ်နေကြပေမဲ့ တပါးသူကို ကူညီဖို့ အချိန်လေး နည်းနည်းဖဲ့ပေးနိုင်ခဲ့ကြရင်…။ တာဝန်အရပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ ရဲအရာရှိတွေ စေတနာအနည်းငယ်ပိုထားပြီး အလုပ်နည်းနည်းပိုလုပ်ကြရင်…။
နောက်ဆုံး ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သားသမီးတွေကို ကိုယ်တာဝန်ယူစိတ်လေးရှိကြရင်…။တာဝန်မယူချင်ရင်တောင် မရက်စက်ကြရင်…။
သမီးလေးဟာ အခုအချိန်ဆို အထက်တန်းကျောင်းသူကြီးဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီပေါ့…။သမီးလေး တစ်ယောက် ဝဋ္ဋ်ကြွေးရှိခဲ့ရင် ဒီဘဝမှာပဲကြေပါစေလေ…။
( Bucheon, Gyeonggi-do,South Korea )
ဖခငျနှငျ့ မိထှေး ပေါငျးပွီး ကိုယျတုံးလုံးခြှတျ ညှငျးပနျးနှိပျစကျခံရပွီး သဆေုံးသှားရတဲ့ ၁၃ နှဈအရှယျ ကောငျမလေး ရဲ့ ကွကှေဲစရာ ဘဝ
၂၀၁၅ ခုနှဈ ၃ လပိုငျး ၁၆ ရကျနေ့ တောငျကိုရီးယား- ဘူခြှနျးမွို့ ( Bucheon, Gyeonggi-do,South Korea )
အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျ မိနျးမငယျလေးတဈယောကျဟာ တံခါးပိတျထားတဲ့ အိမျအရှမှေ့ာကွောကျလနျ့ အားငယျစှာ ရပျနပေါတယျ။
သူမဟာ ကွောကျလှနျးလို့ တဈကိုယျလုံးတုနျရငျနတေယျ…။ အိမျထဲကို မဝငျရဲလို့ပါ..။ အကွိမျကွိမျအားမှေးပမေယျ့လညျး သူမ အိမျထဲဝငျဖို့ သတ်တိရှိမလာ…။
အခြိနျတှကွောလာတယျ။ နောကျဆုံးတော့ သူမ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ…။
‘ငါ့ ဘဝမှာ ဒီအိမျထဲဝငျဖို့ကလှဲပွီး ရှေးစရာလမျးမရှိတော့တာပဲ… ဖွဈခငျြရာဖွဈ…’ သူမလေးလံစှာတှေးလိုကျတယျ။
လူတှဟော သူမကို အိမျပွေးဆိုတဲ့ နာမညျဆိုးတတျလိုကျကွပွီး မကူညီတော့ဘူးလေ….။
သူမကွားရတဲ့စကားလုံးတှကေတော့… “မိဘတှေ စိတျပူနမေယျ… အိမျပွနျ…”
သူမဟာ လေးလံတဲ့ခွလှေမျးတှနေဲ့ သူမအိမျဖကျကို လြှောကျလာခဲ့တယျ။ အိမျရှရေ့ောကျတော့လညျး အိမျထဲမဝငျရဲတဲ့ဘဝ…။ နောကျဆုံး …သူမ အရဲစှနျ့ပွီး အိမျထဲဝငျလိုကျတယျ..။
၂၀၀၇ ခုနှဈမှာ သူမရဲ့မိခငျဟာ ရငျသားကငျဆာနဲ့ ကှယျလှနျခဲ့တယျ။ အမရှေိစဉျကတညျးက ဒေါသတကွီး ရိုကျနှကျဆုံးမလရှေိ့တဲ့ အဖေ… အခုအမမေရှိတော့ပိုဆိုးလာတယျ..။
အမမေဲ့ကလေး ၃ ယောကျဟာ မကျြနှာငယျငယျနဲ့ လောကအလယျမှာ ကနျြရဈခဲ့တယျ။ သူမက အငယျဆုံးပေါ့ … သူမမှာ အဈမတဈယောကျ အဈကိုတဈယောကျရှိပါတယျ။
၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ဖခငျ ‘ရီ’ဟာ ‘ဘကျချ’ ဆိုတဲ့အမြိုးသမီးနဲ့ နောကျအိမျထောငျပွုခဲ့တယျ။ ကလေး ၃ ယောကျအဖကေို ယူလိုကျတဲ့ မိထှေး ဘကျချဟာ အဖကေိုပဲလကျထပျခငျြတာ… ကလေးတှကေို သိပျပွီး မုနျးတယျ။
ကလေး ၃ ယောကျနဲ့မိထှေးကွား ပွဿနာကကွီးမားလာတယျ။ ၂၀၁၁ ခုနှဈရောကျတော့ အသကျ ၂၀ ရှိပွီဖွဈတဲ့ အဈကိုအကွီးဆုံးဟာ အိမျကထှကျပွီး အဆောငျမှာနလေိုကျတော့တယျ။
အသကျ ၁၈ အရှယျရှိတဲ့ အဈမလတျကတော့ ဂြာမနီကို ပညာသငျဖို့ ဖခငျကလှတျခဲ့တယျ။ သူမဖခငျနဲ့မိထှေးဟာ နှဈယောကျထဲလှတျလှတျလပျလပျနခေငျြလို့ သူမကို မိထှေးရဲ့ ညီမအရငျးအိမျပို့လိုကျကွတယျ။
မိထှေးညီမမှာ သားသမီးတှနေဲ့… သူတို့အားလုံးပေါငျးပွီး ကလေးမလေးကို နှိပျစကျကွတယျ။ သူမ အမွဲအရိုကျခံရတယျ…။ သူမြားအိမျမှာ သူမြားမကျြနှာကွညျ့ပွီး ကွောကျလနျ့စှာနဲ့ နထေိုငျခဲ့ရတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ သူမ အဖနေဲ့ မိထှေးဟာ နှဈယောကျထဲကနျြခဲ့ပွီး အပြျောဆုံးပြားရညျဆမျးတဲ့နတှေ့ကေို ပိုငျဆိုငျနခေဲ့တာပေါ့…။၂၀၁၅…မှာ သူမဟာ အခု အသကျ ၁၃ နှဈ … မူလတနျးကြောငျးပွီးလို့ အလယျတနျးတကျဖို့ တဈပတျပဲလိုတော့တဲ့အခြိနျ…။
သူမဘဝရဲ့ ကွီးမားတဲ့ပွောငျးလဲခြိနျ… သူမ အလယျတနျးကြောငျးသူကွီးဖွဈတော့မယျ..။ ဒါပမေဲ့ သူမမှာ ဘာတဈခုမှ ပွငျဆငျမှုမရှိခဲ့။သူမအတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာ အလယျတနျးကြောငျးကွီးကို တကျရမယျ့အခြိနျ သူမရဲ့နံဘေးမှာ အားပေးကူညီမယျ့သူ တဈယောကျမှမရှိခဲ့…။
“အနျတီ .. ကြှနျမ ကြောပိုးအိတျ အသဈလေး လိုခငျြလို့…” မိထှေးရဲ့ညီမက သူမကို နှိပျစကျတယျ…။ ဒီတဈခါတော့ သူမ တျောတျော ဒါဏျရာရသှားတယျ။နောကျဆုံး ဒီလိုနှိပျစကျတာ မခံနိုငျလှနျးလို့ သူမဟာ မိထှေးရဲ့ညီမအိမျကထှကျပွေးခဲ့တယျ။
အဲဒီနဟေ့ာ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ၃ လပိုငျး ၁၅ ရကျနဖွေ့ဈတယျ။သူမ အခငျဆုံးသူငယျခငျြးဆီသှားပွီး တဈညလောကျအိပျခှငျ့ပွုဖို့ တောငျးဆိုလိုကျတယျ။ သူမတကိုယျလုံးရနတေဲ့ဒါဏျရာတှေ ၊ အညိုအမညျးစှဲနတောတှသေူငယျခငျြးကို ပွ…သူမငိုတယျ..။
“ငါဘာဆကျလုပျရငျ ကောငျးမလဲသူငယျခငျြး..?” သူငယျခငျြးမလေးက“ငါ အကွံရပွီ… ငါတို့တတှေ မူလတနျးတုနျးက အတနျးပိုငျ ဆရာမကိုသှားပွောရငျကောငျးမလား..” ရဲစခနျးတိုငျရမှာကိုတောငျ မတှေးတတျကွသေးတဲ့ အရှယျတှမေို့ အားကိုးစရာဆိုတာ ဆရာမပဲလေ..။
၂၀၁၅ ခုနှဈ ၃ လပိုငျး ၁၆ ရကျနေ့ ကလေးမနှဈယောကျဟာ အတနျးပိုငျဆရာမဆီ အားကိုးတကွီးသှားပွီး ဖွဈသမြှ အကွောငျးစုံကို တိုငျကွားလိုကျတယျ။ ဆရာမဟာ သူမ ရောကျနတေဲ့အကွောငျးကို သူမ အဖကေို ဖုနျးဆကျအကွောငျးကွားလိုကျတော့တာပါပဲ…။
” မငျးအဖကေို ဖုနျးဆကျပွီးပွီ.. မငျးအဖေ စိတျဆိုးနတေယျ… အိမျပွနျပါ…မငျးအဖကေ မရိုကျတော့ပါဘူး .. ဆရာမ စကားကိုနားထောငျနျော..အဖထေပျရိုကျရငျ ဆရာမကိုပွောပွ…
”ရကျစကျလိုကျတာ… လို့တှေးရုံမှတပါး သူမ ဘာမှ ဆကျမပွောနိုငျရှာ…။ ဖခငျက သူမကိုလာချေါသှားတယျ။ ဖခငျဟာ သူမကို ဒေါသတကွီးရိုကျနှကျတယျ။
ကွောကျလှနျးလို့ သူမဟာ ဖခငျလဈတာနဲ့ အိမျအပွငျကို ပွေးထှကျလာခဲ့တော့တယျ။ သူမဟာ ဆရာမအိမျကို အားကိုးတကွီးပွေးလာခဲ့ပွနျတယျ။ ဆရာမက အိမျမှာမရှိ…။
သူမ တဈယောကျတညျး တံခါးအပွငျဖကျမှာ ထိုငျငိုနတေုနျး အဆောကျအဦ အစောငျ့ကွီးက ရောကျလာတယျ…။
” အဘရယျ.. သမီးကို ကယျပါ.. သမီး အိမျကပွေးလာခဲ့တာပါ.. အိမျပွနျရငျ သမီးကိုအဖကေ သတျလိမျ့မယျ… သမီးကို တဈညလောကျ အဘတို့အိမျမှာ အိပျခှငျ့ပေးပါ..”
အစောငျ့အဘိုးကွီးက သူမကို မယုံသင်ျကာနဲ့ကွညျ့လိုကျတယျ။ သူမ ဘယျမှာနလေဲ ခြော့မေးပွီး မိထှေးရဲ့ညီမအိမျအထိလိုကျပို့လိုကျပွနျတယျ..။အစောငျ့အဘိုးကွီးဟာ သူမ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အားကိုးတကွီး အကူအညီတောငျးခဲ့သူဖွဈတယျ။
အစောငျ့အဘိုးကွီးသာ သူမကို အိမျပွနျမပို့ပဲ ရဲစခနျးပို့ခဲ့ရငျ….သူမ ဒီလိုအဖွဈဆိုးခဲ့မလားပဲ…။မိထှေးရဲ့ညီမဟာ သူမကို ညတှငျးခငျြး သူမရဲ့ ဖခငျ အိမျနားမှာခထြားခဲ့ပွနျတယျ။
” နငျ အိမျထဲဝငျခငျြဝငျ .. မဝငျခငျြ ကွိုကျတဲ့နရောသှား..ငါ့တာဝနျပွီးပွီ..”
မိုးလငျးခါနီးပွီ…အိမျနီးနားခငျြးတှတှေရေ့ငျ အဖပေိုဒေါသထှကျတော့မယျ…လို့တှေးပွီးနောကျဆုံးတော့ သူမ အိမျထဲဝငျသှားလိုကျတယျ။သူမ ထမငျးမစားရတာလဲ မနကေ့ နလေ့ယျကတညျးက…။
သူမ ဖခငျနဲ့မိထှေးဟာ သူမကို ဒေါသတကွီးစိုကျကွညျ့နကွေတယျ။ပွီးတော့ ဖခငျနဲ့မိထှေးဟာ သူမ တကိုယျလုံးမှာရှိတဲ့ အဝတျအစားတှကေို ဝိုငျးခြှတျပဈလိုကျတယျ။
“ကဲ… ဒီလောကျထှကျပွေးခငျြရငျ ကိုယျလုံးတီးထှကျပွေးလေ..!!”…တဲ့သူမ တဈနလေုံ့းလုံး (၁၅ နာရီ ခနျ့ )ဖခငျအရငျးနဲ့မိထှေးတို့ရဲ့ ရိုကျနှကျခွငျးကိုခံခဲ့ရတယျ…။
စိတျပညာအရ ကိုယျတုံးလုံးခြှတျ အရိုကျခံရတဲ့ လူတဈယောကျဟာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ကွောကျရှံ့မှုကို ဆကျတိုကျခံစားရတယျတဲ့…။ သူမ သှေးပကျြမတတျ သိပျကွောကျနခေဲ့တယျ။
အဝတျအစားမရှိတဲ့သူမဟာ အိမျအပွငျကို မထှကျဝံ့တော့ပဲ နာကငျြတဲ့ဒါဏျရာတှနေဲ့ပေါ့….။ ညဖကျရောကျတော့ အိပျယာထဲကိုဝငျလိုကျတယျ။အဲဒီနကေ့စပွီး သူမဟာ အိမျအပွငျပွနျမထှကျနိုငျတော့ပါဘူး..။
အိပျယာထဲဝငျပွီး နာရီပိုငျးအတှငျးမှာ သူမဟာ အရိုကျခံရတဲ့ဒါဏျရာတှကွေောငျ့ အသကျရူလို့မရတော့ပဲ လောကကွီးကို နာကညျြးစှာနဲ့… နာကငျြစှာနဲ့ နှုတျဆကျထှကျခှာသှားတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ…။
မနကျ ၇ နာရီမှာ ဒေါသမပွသေေးတဲ့ လငျမယားနှဈယောကျက ဆကျပွီး အပွဈပေးဖို့ သူမရဲ့အိပျခနျးတံခါးကို ဒေါသတကွီးဆှဲဖှငျ့လိုကျကွတယျ။
လူယုတျမာ လငျမယားနှဈယောကျ သူမကို ထပျပွီးရိုကျခှငျ့မရှိတော့ပွီ… ကိုယျလုံးတီးနဲ့သူမဟာ အသကျကငျးမဲ့နပေါပွီ…။အဲဒီ လူယုတျမာ ဖခငျနဲ့မိထှေးဟာ သူမ အလောငျးကို စောငျနဲ့ပတျပွီး အနံမထှကျအောငျ နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ဆေးစီရငျခဲ့ကွတယျ…။
စောငျထဲက ကလေးမလေးဟာ သူမကို ကယျဖို့ “ကြှနျမ ဒီမှာရှိပါတယျ..”လို့ ဘယျသူ့ကိုမှ အကူအညီမတောငျးနိုငျတော့ပွီ..။၁၁ လကွာသှားတယျ။နောကျဆုံး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျအကူအညီနဲ့ သူမရဲ့အလောငျးဟာ အိမျအပွငျကိုထှကျနိုငျခဲ့တယျ…။
အိမျဆိုတာ သူမအတှကျငရဲပွညျ…။ငရဲပွညျထဲကို သူမကိုယျတိုငျ ခွလှေမျးပွီး ဝငျခဲ့ရတဲ့အဖွဈ..။သူမဟာ အိမျထဲဝငျ ဝငျပွီးခငျြး နောကျတနမှေ့ာ အသကျသဆေုံးခဲ့ရပါတယျ။၁၁ လ လုံးလုံး သူမရဲ့ အလောငျးဟာ သူမ မနခေငျြတဲ့ အဲဒီအိမျထဲမှာပိတျမိနခေဲ့တယျ…။
ပိုပွီး အံ့သွရတာက သူမကို သတျပဈခဲ့တဲ့ သူမရဲ့အဖအေရငျးဟာ ဘူခြှနျးရဲ့ ( Holiness Church ) ခရဈယာနျ ကြောငျးတဈခုရဲ့ လူတကာကွညျညိုခွငျးခံရတဲ့ ခရဈယာနျ ဘုနျးကွီးတဈယောကျဖွဈတယျ…။
သူမရဲ့ ဖခငျဟာ ဆိုလျးမွို့ရဲ့ နညျးပညာ တက်ကသိုလျ (Seoul Technology University )မှာ လူတကာလေးစားရတဲ့ ပါမောက်ခ တဈယောကျလညျးဖွဈတယျ။
ကလေးမလေး အလောငျးကို ရဲတှေ ရှာဖှနေိုငျခဲ့တာကတော့ အလယျတနျးဆရာမနဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ သူငယျခငျြးမကွောငျ့ပါ။သူမကို ကြောငျးလာမအပျတာကွောငျ့ အလယျတနျး ကြောငျးဆရာမဟာ သူမရဲ့အဖကေို ဖုနျးချေါလာတယျ..။
” ကလေးမလေးကို ဘာလို့ ကြောငျးမပို့တာလဲရှငျ့..?”
“ဒါဆို ဘာလို့ ရဲစခနျးမှာ လူပြောကျမှု အမှုမဖှငျ့တာလဲရှငျ့.. ကြှနျမ အမှုဖှငျ့ရမလား…?”ကလေးမအဖေ ရီ ဟာ မတတျသာလို့ နောကျဆုံး လူပြောကျမှုဖှငျ့လိုကျရတယျ…။ ရဲစခနျးမှာ သူမအဖဟော ဒီလိုရေးတယျ။
ကလေးမလေးပြောကျသှားနေ့- ၂၀၁၅ ခုနှဈ ၃ လပိုငျး ၁၇ ရကျနေ့ ကလေးမလေး လောကကွီးကိုထှကျခှာသှားတဲ့နေ့…။
” အာ..,သမီးက ငှတှေေ အမြားကွီးယူပွီး အိမျကထှကျပွေးသှားတာဗြ.. သိပျတော့ စိတျပူစရာမလိုဘူး…”
လောကကွီးထဲက ဘယျလို မိဘမြိုးက ၁၃ နှဈအရှယျမိနျးကလေး အိမျကထှကျပွေးသှားတာကို ငှတှေပေါသှားလို့ စိတျမပူတာပါလိမျ့…။သာမာနျလူတဈယောကျတောငျ ဒီလိုတှေးတတျပမေဲ့ ရဲစခနျးကတော့ အလုပျသဘောအရပါပဲ…။ “ဪ.. ဟုတျတာပေါ့ဗြာ..”
” ဒီကောငျမလေး ခဏခဏအိမျကထှကျပွေးတော့ ကြှနျတေျာ့အဖို့ မထူးဆနျးသလိုပါပဲဗြာ..” လောကကွီးမှာ လူတှဟော ဒီလို စာနာစိတျမဲ့ကုနျကွပွီ…။ကလေးမလေးကို လူတှအေားလုံး မသှေ့ားကွပွနျရော…။
ဒါနဲ့ပဲ ၂၀၁၆ ခုနှဈကိုရောကျလာပွီ..။ ကလေးမလေး ပြောကျဆုံးသှားတာကို မမပေဲ့ ဝမျးနညျးနတေဲ့သူတဈယောကျရှိတယျ။ကလေးမလေးရဲ့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးမလေးပေါ့…။ သူငယျခငျြးမလေးဟာ သူမမိခငျကို ရဲစခနျးပို့ပေးဖို့ ပူဆာတယျ။
” ကြှနျမ သူငယျခငျြးနဲ့နောကျဆုံးတှတေဲ့နကေ့ သူငယျခငျြးဟာ အရိုကျခံထားရတာ တဈကိုယျလုံး အညိုအမညျးစှဲနပေါတယျ..”
သူငယျခငျြးမလေး တိုငျကွားခကျြအရ ဒါဟာ ကလေးနှိပျစကျညှငျးပနျးမှု.. ။ရဲတှဟော ဝရမျးမပါ အိမျထဲဝငျရှာရလို့ရခဲ့တယျ။
အခုမှရဲတှသေတိပွုမိတာက ကလေးမရဲ့အဖကေို ခြိနျးတိုငျး အိမျမှာ အတှမေ့ခံခဲ့…။ မသင်ျကာစရာ…။ ရဲတှဟော ရီနဲ့ ဘကျချ လငျမယားနတေဲ့အိမျထဲကို ခှငျ့မတောငျးပဲ ရုတျတရကျဝငျလိုကျတယျ..။
အနံ့တဈမြိုး လှိုငျတကျလာတယျ… အမှေးနံ့လိုလို…။ အိပျခနျးတံခါးကိုတှနျးဖှငျ့လိုကျတော့ စောငျနဲ့ပတျထားတဲ့ မမျမီရုပျအလောငျးတဈခု … ။
သူမ အလောငျးကို အနံ့မထှကျအောငျ ဆေးနဲ့စိမျ.., ရမှေေး .. စပရေးအစုံအလငျ အမြိုးမြိုး လုပျထားကွတာကို အံ့ဩတကွီးတှလေို့ကျရတော့တယျ..။
“သမီးလေးကို ဆုတောငျးပေးရငျ အသကျပွနျရှငျမယျထငျလို့ နတေို့ငျးဆုတောငျးပေးနခေဲ့တာပါ…” ခရဈယာနျဘုနျးကွီး အရခွေုံ ပါမောက်ခကွီး ရီ ဟာ ရူးခငျြယောငျဆောငျတယျ။
ပထမတော့ ရဲတှကေ ” စိတျမြားမနှံ့လို့လား..?” ဆိုပွီးတှေးကွသေးတယျ။ သမီးလေးဆုံးတဲ့နကေို့ စဈဆေးလိုကျတော့ ဘဏျကဒျသုံးထားတာတှရေ့တယျ…။
သမီးလေးဆုံးတဲ့နမှေ့ာ ကွကျကွျောနဲ့ ဘီယာတှေ ဝယျပွီး လငျမယားနှဈယောကျ သောကျစားနကွေတာကို သိသှားကွတယျ…။ ရကျစကျလိုကျတာ…။ ဒါဟာ ဆုတောငျးပေးတာလား…။
လူသားတဈယောကျကတော့ ဆာလောငျ နာကငျြစှာနဲ့ မကျြရညျစကျလကျ အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရ….။ဖခငျဆိုပမေဲ့ တိရိစ်ဆာနျစိတျဝငျနသေူကွီးကတော့ ကွကျကွျောနဲ့ ဘီယာ…။
လောကကွီးဟာ တဈခါတဈလေ ဒီလို သိပျကွောကျဖို့ကောငျးတယျ…။ နောကျဆုံး အခြိနျ အထိ ရီ ဟာ သူ ခရဈယာနျဘုနျးကွီး ဆိုတာကို အသုံးခခြငျြခဲ့သေးတယျ။
ဘာတဲ့..? ဆုတောငျးရငျ အသကျပွနျရှငျမတဲ့လား..? ရီ နဲ့ ဘကျချကို အမှုစဈကွတယျ။သဆေုံးသှားတဲ့ သူမဟာ အစာရစောတောငျ ဝ လငျအောငျမစားခဲ့ရဘူးဆိုတာ သူငယျခငျြးကတဆငျ့ ဖျေါထုတျနိုငျခဲ့တယျ..။
မိထှေးက သူမ တဈခါမှ မနှိပျစကျခဲ့ပါဘူးလို့လိမျတယျ။ ဒါပမေဲ့ မိထှေးညီမက အပွဈကမြှာစိုးတော့ အဈမ မကောငျးကွောငျးတှေ ဖျောထုတျတော့တယျ…။
နောကျဆုံး မိထှေးနဲ့ ဖခငျ စိတျတူ ကိုယျတူ စိတျတိုငျးကနြှိပျစကျခဲ့တာ အကုနျပျေါတော့တာပါပဲ…။ဖခငျနဲ့ မိထှေးဟာ ကလေးမလေးကို ညီမအိမျမှာထားတယျဆိုပမေဲ့ ညီမ စိတျတိုငျးမကြ ပွနျတိုငျတနျးရငျ သမီးလေးကို သူတို့လငျမယားအိမျချေါပွီး နှိပျစကျနကြေ…။
ပွဿနာက သူတို့နှဈယောကျ ဟာသမီးလေးကို တတိတိနဲ့ သတျခဲ့ကွတာမှနျပမေဲ့ လူသတျမှုလို့ တရားစှဲရအောငျ သကျသမေလုံလောကျခဲ့..။၁၁ လကွာပွီဖွဈတဲ့ အလောငျးမှာ သကျသရေယျလို့ သိပျမရှိတော့ပါဘူး..။ရိုကျနှကျလို့ သသှေားတာ မှနျတယျ.. ။
ဒါပမေဲ့ ရိုကျရငျးနဲ့ ကလေးမလေးက အသကျထှကျသှားတာမဟုတျဘူး။ သကျသမေရှိဘူး။ ဒါကွောငျ့ကလေးနှိပျစကျမှုနဲ့ပဲ တရားစှဲနိုငျတော့တယျ။
ဒါကွောငျ့ ရဲထောကျလှမျးရေးအဖှဲ့က ဖခငျ-ရီ ကို ထောငျဒါဏျ ၁၅ နှဈ ပေးပွီး မိထှေး-ဘကျချကို ထောငျဒါဏျ ၁၂ နှဈကခြံစဖေို့ တရားသူကွီးဆီ အဆို တငျသှငျးကွတယျ။
ဒါ ရဲထောကျလှမျးရေးဖကျကလုပျနိုငျတဲ့ တရား ဥပဒဘေောငျအတှငျးက အမွငျ့ဆုံး အပွဈပေးနိုငျမှု…။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ ရဲ ထောကျလှမျးရေးအဖှဲ့တှဟော သူတို့ တတျနိုငျသလောကျအမွငျ့ဆုံးစှဲခကျြတငျပွီး အမွငျ့ဆုံး အပွဈဒါဏျပေးအောငျ တောငျးဆိုလရှေိ့တယျ။
တရားသူကွီးက ရဲထောကျလှမျးရေးဖကျက အဆိုတငျသှငျးတာထကျ လြှော့ပွီး အပွဈပေးလရှေိ့တယျ။
ဒီတဈခါတော့ တရားသူကွီးဟာ ယုတျမာတဲ့လငျမယားကို ရဲထောကျလှမျးရေးတှေ တငျသှငျးတဲ့ အဆိုထကျ ပိုပွီး အပွဈပေးခဲ့တယျ။
ဖခငျ ရီ ကို ထောငျဒါဏျ ၂၀ နှဈ…. မိထှေး ဘကျချကို ထောငျဒါဏျ ၁၅ နှဈ….။လငျမယားနှဈယောကျဟာ ဒီလိုကွီးမားတဲ့အပွဈဒါဏျနဲ့ သူတို့နှဈယောကျ မတနျပါဘူးတဲ့… အပွဈဒါဏျလြှော့ပေါ့ဖို့ အယူခံဝငျကွတယျ..။ ဖခငျဖွဈသူက ဒီလိုပွောပါတယျ…။
“ကြှနျတေျာ့ သမီးဟာ အရိုကျခံရထိုကျလို့ ရိုကျခဲ့တာပါ… သူ့အပွဈသူခံရတာပါ…”…တဲ့..။ ဒါ ဖခငျ တဲ့လား..?
ဒီလူကို တောငျကိုရီးယားပွညျသူတှဟော နာကညျြးရှံရှာလှနျးလို့ သဒေါဏျတောငျ ပေးစခေငျြကွတယျ…။
ကလေးမလေးရဲ့ မူလတနျးကြောငျး မှတျတမျးမှာ ကလေးမလေးဟာ စာကွိုးစားသူ…ရိုးသားသူ… ကွငျနာတတျသူ… သူ့တာဝနျသူယူလိုစိတျကွီးမားသူ ..လို့ အတိအကရြေးထားတယျ။
သူမဟာ အရိုကျခံထိုကျတဲ့မိနျးကလေးမဟုတျဘူးဆိုတာ သကျသပေဲလေ…။ဒါကွောငျ့ အဖယေုတျရဲ့ အယူခံကို တရားသူကွီးက ပယျလိုကျပါတယျ။
ဒီကလေးမလေး သတငျးကိုကွားရတဲ့ တောငျကိုရီးယားပွညျသူ ပွညျသားတှဟော ပူဆှေး ဝမျးနညျးရတယျ…။ သူတို့တှအေထဲက ဝမျးအနညျးဆုံးသူတဈယောကျရှိနပေါတယျ…။
အစောငျ့အဘိုးကွီးပါ….။ အဘိုးကွီး မကျြရညျကနြခေဲ့တယျ။ ဒီလောကကွီးက လူကွီးတှဟော ကလေးတှေ စကားပွောရငျ အစ အဆုံးနားထောငျပေးကွရငျ..။
ဘဝမှာ ကိုယျ့အပူနဲ့ကိုယျ အလုပျရှုပျနကွေပမေဲ့ တပါးသူကို ကူညီဖို့ အခြိနျလေး နညျးနညျးဖဲ့ပေးနိုငျခဲ့ကွရငျ…။ တာဝနျအရပဲ အလုပျလုပျတဲ့ ရဲအရာရှိတှေ စတေနာအနညျးငယျပိုထားပွီး အလုပျနညျးနညျးပိုလုပျကွရငျ…။
နောကျဆုံး ကိုယျမှေးထားတဲ့ သားသမီးတှကေို ကိုယျတာဝနျယူစိတျလေးရှိကွရငျ…။တာဝနျမယူခငျြရငျတောငျ မရကျစကျကွရငျ…။
သမီးလေးဟာ အခုအခြိနျဆို အထကျတနျးကြောငျးသူကွီးဖွဈဖို့ ပွငျဆငျနပွေီပေါ့…။သမီးလေး တဈယောကျ ဝဋ်ဋျကွှေးရှိခဲ့ရငျ ဒီဘဝမှာပဲကွပေါစလေေ…။